White linoleum na-enye ụlọ ahụ anya nke ịdị ọcha zuru oke, ebe ọ bụ na anya na-eme ka ọ dịkwuo mbara, dị ọkụ. A na-akpọ Linoleum "na-acha ọcha" kama nke ahụ, ọ bụ n'okpuru osisi ọcha. Ọ bụrụ na linoleum na-acha ọcha nwere otu àgwà ahụ dị ka ihe na-egbuke egbuke, mgbe ahụ, ụlọ ahụ eji ya mee ihe ga-eleba anya ma dị mma.
Uru nke linoleum na-acha ọcha
Ogwe n'elu, nke polyurethane, ọ bụghị nanị na-etolite mmetụta dị egwu n'elu, ma na-enyekwa linoleum nchebe ọzọ, nke na-enye gị ohere itinye ya na paseeji, na kichin. Na-asacha linoleum ọcha dị ka agba ọchịchịrị na-emetụta ọ bụghị site na agba, ma site na ederede, ma ájá dị n'elu ala dị ala anaghị adị mfe.
Maka kichin, linoleum na-acha ọcha maka laminate dị oke mma, ọ ga-adị irè karị, mgbe ha na-ahụ anya ha adịtụghị na-achọpụta, ma dị iche iche na ọnụahịa.
Ọ na-adọrọ mmasị dị n'ime ime ụlọ kichin linoleum na-acha ọcha n'okpuru osisi ahụ, ha yiri nke ahụ, ma linoleum dị ọkụ ma dị irè. Ịda ala n'elu ala kichin nke kichin, glassware ma ọ bụ ọkpụite ga-agbaji n'ime obere iberibe, mgbe ahụ, ịdaba na linoleum, dịcha ka ọ dị.
Na-ejikarị linoleum dochie ihe mgbochi ahụ n'ala, nke a na-eduga na nnukwu ego efu. Ụdị dịgasị iche iche na-emepụta linoleum, na-enye gị ohere ịmepụta ihe ngwọta na-adọrọ mmasị na-adọrọ adọrọ, dịka ọmụmaatụ, icho ala n'ala n'okporo ụzọ ahụ dịka nke na-acha ọcha na oji ojii, nke dịkwa ka taịl nile na-ahụ anya.
Linoleum, ọcha dị ọcha na-enweghị ụkpụrụ, ga-eme ka ụlọ ahụ nwee mmetụta nke ịdị ọcha na oyi, ya mere, ọ bụ ihe dị mma iji ya mee ihe dịka iche na ime ime ụlọ ahụ. N'ịbụ ndị na-eji ụlọ linoleum eme ihe dị mma, ị nwere ike ịchọta ọrụ kachasị atụ anya.
Ya mere, linoleum na-acha ọcha, nwere ike ịbụ ihe na-egbukepụ egbukepụ. Cool white linoleum ga-eme ka obi dị jụụ n'ime ụlọ ahụ, mee ka ọ dị ọhụrụ, na-eme ka ohere ahụ gbasaa. Ọ ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị inwe ụdị linoleum dị na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ụda olu dị mma ga-enye aka ịmepụta ọnọdụ azụmahịa na ya, ga-eme ka ndị ọrụ maka ịhazi na ime mkpebi.
N'iburu n'uche uru nile nke linoleum na-acha ọcha, anyị nwere ike ikwu ọnụnọ nke otu na otu ihe ahụ: ọ ghaghị idobe ya mgbe niile, karịsịa na oge mgbụsị akwụkwọ, mgbe ọ bụ mmetọ dị mma.
Provence Dị Nsọ
Ihuenyo maka ime ụlọ ịwụ
Ngwongwo n'ime ime ụlọ ịwụ
Na-eji aka ha ekpuchi oche
Ngwongwo maka ime ụlọ si osisi siri ike
Uwe ejiji n'ime ụlọ
White tile n'ime ime ụlọ ịwụ
Ugbo ala na aka ya
Obodo mara mma
Nkpu akwa akwa
Chandeliers na-eji nkà dị elu
Hair - Ejiji 2015
Nwa nwoke nwoke mbụ bụ Heidi Klum anaghị akwa ụta na ya na nwa ya nwanyị anaghị ekwurịta okwu
Microinsult - ọgwụgwọ na mgbatị
Ngosi nke chor na izu 12
Kedu ka esi wepu echiche na egwu na-atụ egwu?
Ntị na-enweghị ikiri ụkwụ
Nri kachasị mma na obere obere
Airedale terrier - ụdị nkọwa
Chicken na prunes - 8 Ezi ntụziaka nke efere na-emeri-merie Nchikota anụ na Fikiere piom
Uwe mara mma maka ụmụ ọhụrụ
Ivan Rein acha anụnụ anụnụ?
Ụgwọ alụmdi na nwunye
Ndụ onwe onye nke Emma Roberts
Ndị na-eji mmiri ezumike
Nri maka gout na ogbu na nkwonkwo
Brooklyn Beckham wepụtara Chloe Moretz na mgbaaka ọlaedo a tụrụ atụ
Panel maka facade nke ụlọ
Kedu ka esi esi esi esi nri sie ngwa ngwa?
Jam sitere na oroma crusts
Efere osikapa - Ezi ntụziaka